eNasha.com - कुकुर अस्पतालमा छाउरा डाक्टर !
कुकुर अस्पतालमा छाउरा डाक्टर !
जापानमा पहिलो पटक २४ घण्टे कुकुरको अस्पताल खुलेको छ । जहाँ छाउराहरुले बूढा कुकुरहरुको ख्याल राख्ने छन् । तिनको हालखबर सोध्ने छन् र तिनलाई जवान महसूस गराउने छन् । खबर तपाइँका लागि अटपटे र चटपटे लागे पनि एपी समाचारले आफ्नो पछिल्लो संस्करणमा यही छापेको छ ।
कुकुर पाल्ने मालिकले ९८ हजार येन अर्थात् ८ सय अमेरिकी डलर तिरे जापानको राजधानीस्थित सोलादी केयर होममा भर्ना गराउन सक्दछन् । गएको शुक्रबारदेखि यो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको पूर्वी जापानको टोचिगीमा अवस्थित सोलादी कम्पनी र एन्दो भेटेरिनरी क्लिनिकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जनाएका छन् ।
जसरी मान्छेको हेरचाह गर्न हरेक घण्टा डाक्टरहरु वरिपरि घुमिरहन्छन्, त्यस्तै यहाँका डाक्टर पनि चौबीसै घण्टा सुविधा दिन कुकुरका अघिल्तिर रहने छन् । हरेक घण्टा तिनको जाँच हुनेछ । अस्पतालमा नै भर्ना गरिएका कुकुरहरुलाई विशेष किसिमको खानाको व्यवस्था गरिनेछ ।
एक पटकमा २० कुकुरलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना लिइनेछ । ती २० कुकुरहरुलाई आफू बूढो भएको अनुभव नगराउन र तिनलाई भरपूर मनोरञ्जन दिलाउन स-साना छाउरा तिनीहरुसँग खेल्न हरदम तयार हुनेछन् । सञ्चालकहरुका अनुसार बूढा कुकुरहरुले छाउरासँगको खेलकूदमा आफूलाई जवान महसूस गराउनेछन् र बूढ्यौली बिर्सनेछन् ।
जापानमा पछिल्लो समयमा कुकुर पाल्नेहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । कुकुर पालकहरुको संख्या बढ्दै जाँदा त्यहाँ घरपालुवा जनावरको स्तरीय अस्पतालको ज्यादै आवश्यकता बढेको छ । तिनको खानालगायत अन्य सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने संस्था तथा व्यवसायिक पसलहरुको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा यो अस्पतालले जुन सेवा र सुविधाको घोषणा गरेको छ, त्यसले कुकुरपालकहरुलाई आकषिर्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
उमेर ढल्किसकेका कुकुरहरुलाई पालकहरु बढी नै माया गर्ने हुनाले कुकुरहरुलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन, एरोमाथेरापी र एकुप्रेसर जस्ता स्वास्थ्य सेवातर्फजापानीहरुको चासो बढ्दै जान थालेको छ ।
यस्तो पनि ! जनावर माया सुन्दरी भव्यता मूर्ख्याइँ सेलेब्रिटी इन्टरनेट बलिउड मुद्दा मामिला उदेकलाग्दो नग्नता विज्ञापन गुगल श्रीमानश्रीमती उपाय परिस्थिति फट्याइँ उदारता हलिउड